Siemens PLC, munhu-muchina interface
Kugadziriswa kwepakati kweBST
Muchina wese unodzorwa nePLC, man-muchina interface yekubata screen kushanda
PP, PE Firimu Pelletizing Line Zvimiro:
PP, PE Firimu Pelletizing Line Isa kana fambisa firimu rakachena kana geza-yakachena firimu Mushini wakaunganidzwa.PP,PE Firimu Pelletizing Mutsetse Mushure mekuita granuru inoenda Mu extruder yekupeta.
Inokodzera compress yakaoma plastiki, chipanje, fiber, inogona etc.
PET Mabhodhoro Vertical Baler akagadzirirwa kudzvanya uye PET Mabhodhoro Vertical Baler kurongedza mametareta ane yakakwirira rebound simba rinosanganisira mapurasitiki akaomarara.PET Mabhodhoro Vertical Baler AKAGADZIRA PET mabhodhoro, uswa, siponji, machira nevamwe. Mitemo Yekubhadhara: 30% dhipoziti neT / T paunenge uchisimbisa kurongeka, 70% chiyero neT / T isati yatumirwa. Kana isingachinjiki L / C pakuona Kuiswa uye Kudzidziswa Mutengo uyu unosanganisira mubhadharo wekumisikidza, Kudzidziswa uye muturikiri, Zvisineyi, mutengo wakaenzana senge matikiti emhepo ekudzoka ekunze pakati peChina nenyika yeMutengi, zvekufambisa zvemuno, pekugara (3 hotera nyeredzi), uye homwe mari pamunhu kune mainjiniya uye muturikiri achaita. kuberekwa nemutengi.Kana, mutengi anogona kuwana muturikiri anokwanisa munharaunda.Kana panguva yeCovid19, ichaita online kana vhidhiyo rutsigiro newhatsapp kana wechat software. Warranty: Mwedzi gumi nemaviri mushure meB / L zuva Iyo yakanaka midziyo yeindasitiri yepurasitiki.Zvakawanda zviri nyore uye zviri nyore kugadzirisa, chengetedza vashandi uye mutengo kutsigira vatengi vedu kuita zvakanyanya effierency.
LQA-1070T40 PET Mabhodhoro Vertical Baler
Muchina uyu unoshandisa hydraulic drive ine masilinda maviri, anogara uye ane simba.
LQ150BL-PET Mabhodhoro Horizontal Baler
Horizontal semi-otomatiki baler muchina mhando,PET Mabhodhoro Horizontal Baler ane hydraulic kumusoro-pasi kuvhura gonhi dhizaini, PET Mabhodhoro Horizontal Baler anogona kuona kwakasimba kudzvanya.